Nezvedu - Yakadzikama CBD
12 Chokwadi Nezve Delta 8 THC
Mapurazi Akadzikama anodada nekuve mugadziri wezvigadzirwa zveCDD chete pamusika zvinotenderwa neFood Alliance, sangano risingabatsiri rave kumisikidza mureza weUS wekurima nekusingaperi kwemakore makumi maviri.
Varimi vedu vanoteedzera zvakaomarara uye zvakakwana mirayiridzo yezvekurima, kuona kuti yedu CBD kunobva kumapurazi anochengetedza nharaunda, anochengetedza zviwanikwa uye ane hukama munharaunda. Ichi chikafu cheAlliance Alliance chinoratidza kuti purazi, sango, kana bhizinesi rekushanyirwa rakaongororwa zvichipesana neyakaomeswa chitupa zviyero zvinoda matanho ane musoro kumatunhu kwenguva refu, magariro, uye hupfumi.
Hazvishamise kuti Tranquil CBD inzvimbo inodiwa yehutano kune avo vane hanya nemuviri wavo nenyika yavo.
PaTransquil CBD, isu tinotenda kuti mhando yedu yepamusoro, zvigadzirwa zvehutano zvakachipa zvinogadzirwa kubva hemp-yakatorwa CBD inopa yakanakisa mishonga yekurapa yekusimudzira hutano hwese uye hutano hwevatengi vedu.
Zvinyoro nyoro zvigadzirwa zveCBDD zvinogadzirwa kubva pamusoro mhando, hunyanzvi kukohwa hemp zvirimwa. Zvigadzirwa zvedu hazvisi zveGMO uye hazvina mishonga yekuuraya zvipuka, mishonga yesora, kana manyowa emakemikari. Zvese zvigadzirwa zvedu batch yakaedzwa nevechitatu-bato marabhoritari uye maoiri edu akachengeteka zvachose kudyiwa. Saka kana iwe uchitsvaga yakanakisa CBD zvigadzirwa pamusika, usatarise mberi. Runyararo CBD ndiyo mhinduro yako! Rega zvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro zviite nyore hupenyu hwako.
Basa redu ndere kuunza mhando yepamusoro hemp cannabidiol (CBD) zvigadzirwa zvakavakirwa kumusika. Isu tinoshanda kudzidzisa vamwe nezve mabhenefiti ekutora hemp, uye chinangwa chedu kushandisa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro izvo zviri zvakanakisa muindasitiri kubatsira kuwedzera hutano nekugara kwevatengi vedu.
ZVAKAITIKA CBD & HEMP FARMS
Yakadzikama CBD ndiyo sosi yako yepamusoro yehunhu, zvigadzirwa zvisingadhuri zvehutano zvakagadzirwa kubva hemp-yakatorwa CBD
© 2020 Runyararo CBD
wapfuura makore gumi nemasere here?
Izvo zviri kuseri kwemusuwo uyu zvinorambidzwa, une makore gumi nemasere ekuberekwa kana kupfuura here?